Mitady traikefa fitetezana sakafo tsy manam-paharoa? Ahoana ny bibikely sy grub?
Home » Vaovao momba ny dia lavitra mahandro sakafo » Mitady traikefa fitetezana sakafo tsy manam-paharoa? Ahoana ny bibikely sy grub?
Raha mitady fitsangatsanganana sakafo manaitaitra ianao dia ireto misy zavatra mety hataonao ao anaty buggy wormy hohanina eran'izao tontolo izao.
Ny bibikely sy ny ahitra dia sakafo malaza sy mahazatra any amin'ny firenena maro manerantany. Tadidiko ny dia nataoko tany Korea Atsimo rehefa nandeha sambo nankany amin'ny nosy iray izahay ary rehefa nidina, dia nisy fofona manitra be teny amin'ny rivotra. Izaho irery ve no nahatsikaritra an'io, satria toa tsy nahasarika olon-kafa izany. Rehefa namakivaky ny arabe izahay dia nihanatanjaka ny fofona, noho izany dia fantatro fa teo amin'ny làlana tsara hitadiavana ny loharanon'ny fofona isika. Ary avy eo dia teo izy ireo - ny fotoana nahitan'ny masoko ny fofoko rehefa nibanjina ilay harona feno grama steamed aho.
Nanontaniako ilay mpitari-dalana anay raha izany no noheveriko fa izy ireo, ary nihomehy izy ary nilaza hoe, andao hividy vitsivitsy mba hanandramanao azy. Tena malaza eo amin'ny fisotroana izy ireo, satria mandeha tsara amin'ny zava-pisotro. Eny ary, heveriko fa tsy dia mahaliana ahy izany, fa raha ianao kosa dia ireto ny sasany amin'ireo zavatra kankinana buggy ambony indrindra hohanina eran'izao tontolo izao.
Afrika: Baomba maimbo
Minoa na tsia, ny bibikely maimbo dia mitovy amin'ny tsiron'ny paoma. Izy ireo dia azo hanina mahitsy ho sakafom-pisakafoanana na ampiasaina ho fofona ho an'ny zavatra toy ny laoka. Amin'ireo tranga roa ireo dia ampangotrahina izy ireo, ary mandritra io fizotran-tsakafo io no hamoahany ny fofon'izy ireo ho toy ny tetika velona. Oh, tsara… tsara manandrana bibikely.
Aostralia: Witchetty Grubs
Ireo sakafo matsiro any ivelany dia ao anatin'ny fianakaviana bushmeat. Ny sasany tia azy manta - manandrana toy ny amandy, ary ny sasany kosa mahamasaka azy - mivoaka manandrana toy ny akoho natsatsika. Ny anatiny? Eny, toy ny atody voatoto izy ireo. Mila manohy ve isika?
Kambodza: ​​hala hala
Fa maninona no be loatra ny bibikely eto Azia? Tahaka ny valala, ireto hala ireto dia manana hena betsaka kokoa noho ny valala ary tonga tampoka rehefa manaikitra ao ianao (mitovy amin'ny valala) - fotaka maloto misy atody, taim-bolo ary anaty. Azafady, ampitao lovia aho. Matetika dia nohosorana siramamy, sira ary MSG avy eo nendasina tongolo lay. Eny, tsara izany ampahany izany raha ny marina.
Japon: Mpanenjika tantely
Izay antenainao fotsiny dia ireto misy moto miaraka amin'ny fanenitra voahodina ao alohan'izy ireo namboarina. Na alao sary an-tsaina ny cookie mofomamy sôkôla, afa-tsy ny omena sôkôla dia fanenitra. Ireo fanenitra ireo dia manana fanindronana mahery vaika, noho izany dia manantena isika fa efa voahidy izy ireo alohan'ny nanamboarana azy ireo tao anaty cracker-nao.
Meksika: Caviar bibikely
Any Mexico dia antsoin'izy ireo hoe escamol - caviar bibikely. Izy io dia vita amin'ny ampon'ireo vitsika sy olitra fihinana izay alaina avy amin'ilay zavamaniry mescal na tequila. Ny tsiro dia nofaritana ho nutty sy butera miaraka amin'ny endrik'ireo fromazy. Mmm mmm tsara.
Korea atsimo: kankana landy
Tsy ho an'ny akanjo ihany, Beondegi, fantatra ihany koa amin'ny kankana landy, dia sakafo maivana be mpitia any Korea Atsimo. Ampangotrahin'izy ireo sy ampangotrahina ary alao. Azonao jerena ao anaty bara izy ireo, avy amin'ny mpivarotra amoron-dalana, na aiza na aiza eto amin'ny firenena. Ny tsiro dia mitovy amin'ny hazo voalaza amintsika. Wood. Oviana no fotoana farany nitiavanao hazo?
Azia atsimo atsinanana: Sago Delight
Ity grub ity dia mahabe zavatra azo hanina masaka na manta. Masaka, lazaina fa mitovy tsiro amin'ny bacon, manta… ary manana endrika mamy izy io - inona koa? Tahaka ny fahafinaretan'ny grika aziatika hafa, dia matetika no arotsaka ary andrahoina mba hanampiana ny tsiron'ny lovia.
Afrika atsimo: Worms Mopane
Araka ny tatitra avy amin'ireo izay nanandrana izany, Mopand Worms dia mahatsapa tena toy ny akoho mitono. Lehibe sy be ranony izy ireo - hena ol lehibe - ary matetika dia setroka na maina ary avy eo averina alaina sy masaka amin'ny saosy saosy na voatabia.
Alao sary an-tsaina ny lehibe iray - ary ny tiantsika holazaina dia lehibe - valala voaendy sira, vovo-tsakay ary sakay dia endasina amin'ny wok lehibe. Mahatsapa karazana toy ny hoditra popcorn poakaty, afa-tsy ny zava-misy rehefa manaikitra ao ianao dia misy ranom-boankazo kely miala amin'ny vatana. Gulp. Mangataha Jing Leed hiaina an'ity sakafo "hoppy" ity.
Andro vaovao Spa andro ary mijanona ao amin'ny trano fandraisam-bahiny Corinto